Itafile Yelaptop Kwindawo yokuhlala yomsebenzisi, uya kuba nako ukwenza umsebenzi wetafile yekofu kwaye uhlangabezane neemfuno zokubeka, ukuhamba, ukugcina engqondweni izinto ezininzi; Ayenzelwanga kuphela ukusetyenziswa kweelaptop, kodwa kunokuba yinto ethile ecacileyo yokusetyenziswa kweelaptop; Inokuvumela indawo ezahlukeneyo zokuhlala ngaphandle kokuthintela ukuhamba xa usebenzisa edolweni; Ngamafutshane, ifenitshala yasekhaya ayenzelwe ukuba isetyenziselwe amadolo kodwa isacetyiswa ukuba isetyenziswe ngamaxesha afunyanwa kwiindawo zokuhlala ezifana nezitulo zokuhlala zethutyana.
Isitulo Isitokhwe yindawo ephakathi kwesitulo kunye nesitulo. Izitulo ezenziwe ngokhuni ezingaginyisi mathe zilungele indawo zabucala kunye nezentengiselwano. Uhlobo lwayo olubonakalayo libonisa ubuhle bamaplanga endawo. Uyilo oluntsonkothileyo nolwakhiwo luyenza ukuba ibe nobunzima obuyi-8 mm ye-100 yeepesenti iinkuni ezomeleleyo zokwenza amandla kodwa inqaku elikhanyayo elinobunzima obungama-2300 Gramm kuphela. Ukwakhiwa kwecompact kweStocker kuvumela indawo yokugcina indawo. Ibambelele kwelinye, inokugcinwa ngokulula kwaye ngenxa yoyilo lwayo, iServer ingatyhalelwa phantsi kwetafile ngokupheleleyo.
Itafile Yekofu Ukulahla okuveliswa ziinkuni kunye nemasters yeemarike ngokucokisekileyo; Inomzimba we-lacquer kumthi oqinileyo kunye nemabhule. Ukubhaliweyo okukhethekileyo kwemarble kwahlulahlula zonke iimveliso omnye komnye. Iindawo zetafile yekofu eyehlayo inceda ekuhleleni izinto ezincinci zendlu. Enye into ebalulekileyo yoyilo kukuhamba lula okubonelelwa ngamavili afihliweyo abekwe phantsi komzimba. Olu luyilo luvumela ukudala ukudityaniswa okungafaniyo kunye nemarble kunye nezinye iindlela zokhetho.
Itafile Yomsebenzi Uyilo lujonga ukubonisa ubomi obutshintsha ngokuqhubekayo bendoda yangoku kwisithuba esivelileyo nesinezinto ezibonakalayo ezinendawo enye efanekiswa nokungabikho okanye ubukho beengcezu zeenkuni ezityibilikayo, ezikususayo okanye ezibekiweyo, ezinika ukungangqinelani kwezinto ezinokubakho ukulungiselela izinto kwindawo yomsebenzi, eqinisekisa ngokusisigxina kwiindawo ezenziwe zangokwezifiso kwaye eziphendula kwiimfuno zomzuzu ngamnye. Abaqulunqiweyo baphefumlelwe ngumdlalo we-timbiriche yendabuko, bebuyisela umxholo wokuhlala kwi-matrix yamanqaku ashukumayo obuqu anikezela indawo yokudlala kwindawo yokusebenza.
Ikhaphethi Etshintshayo Iibhothi zenziwe ngerhorombus kunye neehexagons, kulula ukuyibeka ecaleni komnye komnye umhlaba onendawo ethe tyaba. Ifanelekile ukugubungela imigangatho kunye nakwiindonga zokunciphisa izandi eziphazamisayo. Iziqwenga ziza ngeendlela ezahlukeneyo ezi-2. Iziqwenga ezipinki ezikhanyisiweyo zifakwe isandla kuboya be-NZ ngemigca ehlanganisiweyo kwifibre yebhanana. Iziqwenga zeBlue ziprintwe uboya.
Igita Lombane Ukhozi lubonisa umbono omtsha wesiginkci sombane ngokusekwe kwisiseko sokukhanya, ikamva kunye nokuqanjwa kolwimi olutsha loyilo oluphefumlelwe yi-Lineline kunye nefilosofi yoyilo lweOrganic. Ifom kunye nokusebenza ngokudibeneyo kwiqumrhu lonke elinokulingana okulingeneyo, imiqolo edityanisiweyo kunye nemigca yokuqaqamba kunye nokuqonda kokuhamba kunye nesantya. Mhlawumbi yenye yezona mbane zombane zilula kakhulu kwezentengiso.
Chirming Iposta Friday 14 May
Santander World Imizobo Esezidolophini Thursday 13 May
Oli Isitya Somnquma Wednesday 12 May
Yila udliwanondlebe losuku Friday 14 May
Yila intsomi yosuku Thursday 13 May
Uyilo losuku Wednesday 12 May
Umyili wosuku Tuesday 11 May
Iqela loyilo losuku Monday 10 May
Itafile Yelaptop Isitulo Itafile Yekofu Itafile Yomsebenzi Ikhaphethi Etshintshayo Igita Lombane